Umatshini wokutshiza wokuTshiza oMncinci wase China woPhando lwezeNzululwazi yi-Ultrasonic Spray Atomization Equipment Ukwenza kunye neFektri | Qianrong
Umatshini wokuTshiza ngokuNcinci oPhando lwezeNzululwazi yi-Ultrasonic Spray Atomization Equipment
Isixhobo sokucoca ulwelo lwe-Ultrasonic ngumatshini wokutshiza ngokuchanekileyo ochanekileyo olungele uphando lwenzululwazi. Yamkela itekhnoloji yokutshiza ye-QRsonic ye-ultrasonic yokufanisa okuphezulu kwe-mic-micron kunye ne-nano-level level film coating. Isetyenziswa ngokubanzi kwiiseli zepetroli, iiseli zelanga kunye nokutyabeka kweglasi. , Iisekethe zombane kunye namanye amashishini.
I-Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd.yimveliso yobungcali yophando oluzimeleyo kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwezinto eziphezulu zamandla e-ultrasonic kunye neeseti ezigcweleyo zezixhobo zesicelo, kugxilwe kwizicelo zamandla ezingekho mgangathweni. Ezona zicelo ziphambili zibandakanya: ukutshiza iatomization yokutshiza / Ukuthungwa okungagungqiyo, ukumiswa kwe-ultrasonic, njl.
Isixhobo se-Ultrasonic atomization ukutshiza izixhobo: Sebenzisa amandla amaza e-ultrasonic ukophula amanzi okanye ulwelo ukwenza amasuntswana amancinci ee-microns ezininzi ukuya ngaphezulu kwe-100 microns ngobukhulu ukufezekisa ukufuma komoya, ulwelo oluninzi, ukuxuba, ukukhuthaza ukusabela kweekhemikhali, ukutshiza kunye nesinyithi. ukunyibilika kwabalandeli benkqubo kunye nezinye iinjongo.
Ukufana okuphezulu: Ukutshiza kwe-Ultrasonic yitekhnoloji yokutshiza ichane ngokusebenza okuphezulu, esetyenziselwa ukufana okuphezulu kwe-micron kunye ne-nano-scale thin film coating.
Ukonga izinto kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo: Kuba ukutshiza kwesantya esisezantsi ngaphandle koxinzelelo kulula ukuwulawula, kwaye amathontsi awela kwi-substrate endaweni yokubuyela umva kwi-substrate, inokuqinisekisa ukuncitshiswa okubonakalayo kwisixa se-overspray, gcina izinto ezininzi nokunciphisa ukukhutshwa kwendalo. Ireyithi yokusetyenziswa kwento yokutshiza i-ultrasonic ingaphezulu kwamaxesha ama-4 okutshiza ngokwesiko kolwelo olunamanzi amabini.
Ukulawula okuphezulu: Xa kufuneka inqanaba lokuhamba eliphantsi kakhulu, umlomo ngowona unqwenelekayo. Xa amasuntswana atshiziweyo enqunyanyisiwe, aneenzuzo ezizodwa. Ngokusebenzisa isiphumo se-ultrasonic semilomo uqobo, amasuntswana agcinwa emisiwe ngokufanayo kuyo yonke inkqubo yokutshiza ukuze kuqinisekiswe ukuba amasuntswana asebenzayo asasazeke ngokulinganayo kumaleko acekeceke.
Ukusebenza okuphezulu kunye nokugcina amandla: ulwelo ludluliselwa kwintloko yokutshiza ngobunzima bayo okanye impompo yoxinzelelo oluphantsi kwaye ifezekise i-atomization eqhubekayo okanye eqhubekayo, akukho kuvalwa, akukho kunxiba, akukho ngxolo, akukho xinzelelo, akukho ndawo zihambayo, akukho manzi okupholisa afunekayo Ngexesha leatomization, kunye nokusetyenziswa kwamandla asezantsi, izixhobo zilula, izinga lokungaphumeleli liphantsi, umlomo wombane we-ultrasonic unomsebenzi wokucoca ngokwakho, kwaye ulondolozo lwemihla ngemihla lusimahla.
Isetyenziswa ngokubanzi: Isixhobo sokutshiza se-Ultrasonic sisetyenziswa ikakhulu kwiiseli zepetroli, iiseli ezincinci zefilimu ye-photovoltaic, iifilimu ezincinci zelanga, ii-perovskite iiseli zelanga, iiseli zelanga, iigraphene zokwaleka, iiseli ze-silicon photovoltaic, iingubo zeglasi, iisekethe zombane kunye namanye amashishini. Umbhobho ungasetyenziswa kwizisombululo ezahlukeneyo, ilindle, ulwelo lweekhemikhali, kunye nolwelo olunamafutha nazo zinokunyanzeliswa.
Egqithileyo I-3000W Isinyibilikisi eshushu sokutywina ukuTywina kwePlastiki Ukuphelisa iiCaps zokuSonga iMveliso yeWelding yeMveliso
Okulandelayo: I-Ultrasonic Metal Powder Atomization Technology yeTin Powder nguRhoqo oPhezulu oPhezulu
30Khz 700w Ultrasonic Vibratior yeUltrasonic ...
Ukuphindaphindwa okuphezulu kwe-40Khz Ukungcangcazela kwe-Ultrasonic Rubbe ...
I-RFID Smart Card ye-60Khz yeRhoqo yokuSebenza okuPhezulu ...
Ububanzi be-38mm i-28Khz ye-Ultrasonic yeVibration idlulisiwe ...
I-40Khz yokuKhanya okuphathwayo ukuKhangela isixhobo sokuCoca ...
Ultrasonic Ultrasonic Iplastiki Welding Machine for Th ...